Uneminyaka engakanani i-Prince Royce? Biography
Ubume bemiSebenzi yoBomi kunye noMculo weBachata Sensation Singer
Nangona umsebenzi wakhe omfutshane womculo, umculi waseBachata uPrince Royce sele sele eyaziwayo kakhulu kumculo weLatin waseLatin emhlabeni. I-bio elandelayo inikezela ngolwazi malunga neminyaka yakhe yokuqala ekhulayo eNew York City, iimpembelelo zomculo, izizathu ezibangelwa yimpumelelo enkulu ayenayo namhlanje, kunye nokukhethwa kwezinye zeengoma zakhe ezilungileyo.
I-Kid evela kwi-Bronx
UGeffrey Royce Rojas wazalwa ngo-Meyi 11, 1998, eBronx, enye yee-five boroughs zaseNew York City.
Abazali bakhe bobabini bevela kwiRiphabliki yaseDominican , echaza ngokubanzi ubukhulu benkampani iPrince Royce ephuhliswe kumculo waseBachata ukususela kumncinane. Ngoxa uyise wayesebenza njengomqhubi wetekisi kwi-Big Apple, unina wayesebenza kwi-salon enobuhle.
Njengoko nantoni na evela eBronx, iPrince Royce ikhule iphulaphule i-Hip-Hop, iPop kunye ne-R & B. Nangona kunjalo, naye wabonakala kwiindawo ezininzi zeBachata. Xa wayeneminyaka engama-13 kuphela ubudala, wagqiba ekubeni aphishekele iphupha lakhe lomculo ukuze aqale ukubhala izinkondlo kunye nezingoma. Umdla wakhe wokuqala wawujoliswe kwi-Hip-Hop kunye neR & B. Nangona kunjalo, xa ecelwa ukuba acule uBachata, waqonda ukuba uhlobo lunikeza indlela epheleleyo yokufeza iimfuno zakhe zomculo.
'INkosana Royce' iba yi-A Hit Album
Ngengcamango ecacileyo malunga nokubhala nokucula umculo weBachata, iNkosana uRoyce yayilungele ukuhambisa imveliso yakhe yokuqala. I-albhamu yakhe yokuqala, iPrince Royce yatshintsha lo mculi omncinci nowasakhulayo kwiBronx ibe enye yeenkwenkwezi zomculo zaseLatini ezinkulu namhlanje.
I-albhamu iPrince Royce , eyakhishwa ngo-Matshi 2010, yaba enye ye- albhamu eyaziwayo kakhulu ngo-2010 no-2011. Le mpu melelo yayiyiphumo sesandi esiqabulayo sokuba iPrince Royce ifakwe kwiingoma ezinjengokuthi "Yima Ngam," "uCorazon Sin Cara "kunye no" El Amor Que Perdimos ". Nangona kunjalo, isandi asiyena nto kuphela evuselela nge-albhamu.
INkosana uRoyce nayo yazisa naye i-look entsha eyamnceda ukuba aqoke abalandeli kuwo wonke umhlaba.
Kule albhamu, omnye "Hlala Ngam," inguqu yeBachata yeengoma eziyingqungquthela kaBen E. King , yaba yinto ehlabathini lonke eyathatha i-albhamu yonke kwindawo ephezulu yomculo wesiLatini ibonisa yonke indawo. "Yima Ngam" ", eqinisweni, ingoma yokuqala yeBachata eyenza ukuba iziteshi zerediyo zasePapa naseR & B e-US. Kule miqolo, enye "uCorazon Sin Cara" yayingenye yeengoma ezidume kakhulu zango-2011.
Ngombulelo kule mpu melelo enkulu, iPrince Royce nayo yakwazi ukuqokelela ize ithathe ekhaya amanqaku amaninzi amanqaku kuquka iNkcazo yeTropical ye-Award yonyaka kwi-Billboard Latin Music Awards kunye ne- Articical Artist of the Year, kwi- Premio Lo Nuestro .
Iingoma ezigqwesileyo nguPrince Royce
Olukhetho olulandelayo luquka iingoma ezithandwayo ukusuka kwi-albhamu iPrince Royce kwakunye neentle ze-Prince Royce ezibhaliswe kunye nabaculi abanjengeenkwenkwezi zaseLatini zaseYilan Daddy Yankee kunye ne-Mexican Latin Rock band Mana:
"Yima ecaleni kwam"
Mamela / Khuphela / Ukuthenga
"Ul Ultima Carta"
"Ven Conmigo" (kunye noDaddy Yankee )
"El Verdadero Amor Perdona" (kunye noMana)
Iincwadi eziphezulu ezi-7 ngo-King Arthur
IiPapa zeXesha le-16
Ubomi Nemisebenzi Ka-Adam Smith - I-Biography ka-Adam Smith
UkuTyelela ngokukhawuleza nokuSebenza kakuhle
Yintoni uMguquleli oDangel?
I-9/11 I-Tear Drop Memorial evela eRashiya
Ukufa noBomi - Roma 8: 38-39
Izinto zeKholeji yokuThengwa kweeKholeji